Karaa deetaa bani.
Haalata: Jefuraa halata faaayilii ibsuu. Gatii gitaa'aa: Miiltessuu( tartiiba faayiliititti miiltessi),Lamee(deetaa baayitiidhan gahama), naqa( karaa deetaa dubbisuuf banuu), bahaa(karaa deetaa barreessuuf banuu) fi Tasa( faayilii fira ta'an gulaali)
IOMode: Jefuraa akaakuu gahiinsa hiiku. Gatii gataa'aa: Dubbisuu (dubbisuu qofa), Barreessi (Barreessuu qofa), Barreesuu fi dubbisuu (lachuu).
Hayyisa: Jefuraa ittisa haalhojii faayilii erga banamee boodaa. Gatii gataa'aa: Yaagutomaa( faayiliin fayyadamaa biraatiin banamuu danda'a), Cufaa dubbisaa(barreefama faayilii faallaan hayyifame), Cufaa Dubbisuu fi Barreessuu (gahiinsa faayiliin didee)
FileNumber: Himannoon itergaa kamiyyuu 0 hanga 511 karaa bilisaa deetaa agarsiisa.Gahiinsa faayiliitiif ajaja karaa deetaatiin dabarsuu ni dandeessa. Baay'inni faayilii hatattamaan karaa hima banaan dura faankishinii FreeFile jedhuun murtaa'uu qaba.
DatasetLength: Faayiloota gahiinsa tasaatiif, dheerina kuusaa qindeessi.
Qabiyyee faayilii isa hima banaadhaan baname qofa fooyyessuu dandeessa.Yoo faayilii banamee ture banuu yaalte ergaa dogogoratu mul'ata.
Maxxansa #iNumber, "Kun Sarara barruuti"
Print #iNumber, "Kun sarara barruu kan birooti"